Mmegide a ha amalitela? Enyerelarị mmụọ ọgụgụ isi na 2018 dabere na ikpe Els Borst / Bart van U.: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 12 November 2019	• 24 Comments
isi mmalite: rtvdrenthe.nl
Onye ọbụla ka na-echeta ogbugbu onye onye bụbu minista Els Borst ma na-amatabeghị echiche nke PsyOp n'oge ahụ nwere ike ịdọrọ ya ọfụma. Onye 'mmadu ghagburu onwe ya' bu onye gburu ya. Ọ dịkarịa ala, ọ gaara ewe obere oge tupu NFI mara ihe niile dị na mpụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na a hụrụ Borst na ọdọ mmiri. Anyị dị ugbu a, maka na ihe niile anyị maara maka ụdị ikpe a bụ akụkọ na onyonyo na mgbasa ozi na anyị maara ugbu a na, dịka ọmụmaatụ, Algemeen Nederlands Persb Bureau (ANP) dị n'aka onye na-eme telivishọn; onye nwere ulo ihe nkiri na ihe ruru ijeri n’ụlọ akụ. Yabụ na ịnweghị ike ikwu hoo haa na etinyeghị ụdị ikpe igbu ọchụ a dịka ihe nkiri iji kwado ndị mmadụ maka usoro ndị uwe ojii ọhụrụ.
Op March 11 2014 Edere m na nke a akụkọ Els Borst: “Mana lezie anya, n'ihi na tupu ịmara ya, GGD dị n'ọnụ ụzọ gị maka nnabata ịmanye. ”Mara na D maka 'ọrụ' ugbu a ejiri Z maka 'nlekọta' dochie D maka 'ọrụ'. Na 2018, ihe m dọrọ aka na ntị ga-emezuworị. Ya mere odi oke nkpa ichota akwukwo nke edeputara n’ozi ekwuputa ihe ndia? Kpamkpam ee, nke Els Borst na onye eboro ebubo na-egbu Bart Bart U.
Ugbu a, ị ga-asị:Eeh, ma Bart van U amaala ya ikpe, ọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ maka 8 kemgbe ọtụtụ afọ wee nata ọgwụ mgbochi TBS, yabụ ọ bụ eziokwu n'eziokwu". Omume nke PsyOp bụ na a na-egwu egwuregwu ahụ niile site na A ruo Z na mmekorita ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ikpe ziri ezi na mgbasa ozi; gụnyere ihe ngosi mgbasa ozi gbasara ụdị ikpe a. Naanị mgbe ahụ ka a ga-eme ka ndị mmadụ banye n'ọnọdụ nnabata maka iwebata ihe ha na-agaghị anabata, mana ugbu a nakweere dị ka 'ọ dị mkpa'. Na PsyOps, maxim bụ mgbe niile 'Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta"etinyere, nke pụtara na e mepụtara nsogbu nke oke mmekọrịta ọha na eze iji kpasuo mmeghachi omume nke oke iwe na mmetụta site na mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, wee malite iwepụta nsogbu nke nọrọla na shelf. Yabụ ọ bụrụ na ị ga - eme ka ndị mmadụ kwenye na 'nwoke nwere mgbagwoju anya' egbula Els Borst, ịnwere ezi alibi iji mechie ndị agbagha. Bart van U. bụ onye edemede ya na edemede PsyOp nke kwesịrị ịkwadebe iwu a? Ọ dị mma, ekwuputara ya nke ọma akụkọ ikpeazụ ndị na - agbanwe otu ọrụ na - esite na Ngalaba Ahụike, Welfare na Sport:
N'ihi nkwenye ndị a, a na-agwa akwụkwọ ozi a ma ndị isi oche na ndị na-esote ya. Na nso nso a ka Mr Hoekstra natara mkpesa na-anakpo anya banyere usoro mmelite a na-esote nyocha nke ikpe Bart van U.
Oleekwa ihe ọzọ dị n’akwụkwọ ozi ahụ? Akwụkwọ ozi ahụ na-akuzi mpaghara GGZ niile ịzụta ọgụgụ isi. Cargbọ a kwadebere n'ụzọ pụrụ iche iji bulie 'ndị mmadụ gbagwojuru anya.' Uche dị otú a na-enwekarị windo kpuo ìsì ma nwee ụzọ niile dị n'ụlọ ịnọchi anya mmadụ na nchekwa. Ezi uche, ị nwere ike iche, maka na onye dị ụdị a nwere ike ịgbasi mbọ ike. Mgbe okwu ikpe Ane Faber gasịrị, a kwenyechara onye ọ bụla iwebata usoro ọgụgụ isi a na ikpe Thijs H. site n'okike nyekwaara onyinyo ahụ na obodo anyị jupụtara na ndị nwere mgbagwoju anya. N'okwu abụọ ahụ, m buru amụma na ọ ga-abụ gbasara ikpochapụ ndị na-enweghị mmasị na ọha mmadụ site na inye ha 'ihe mgbagwoju anya' mmadụ.
Akwụkwọ ozi ahụ sitere na ozi ahụ nwere ihe dị ịtụnanya ma na-atụ anya iwu ọhụrụ maka nnabata mmachi. Biko gụọ mpempe dị n'okpuru ma cheta na n'akwụkwọ ya 1984 George Orwell na-ekwu maka 'otu ahụ' na-atụgharị ihe okwu pụtara. Ọ kpọrọ "okwu ọhụrụ" a (nke a na-akpọkwa "okwu abụọ"). Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị mgbe niile na a họọrọ okwu ahụ bụ 'nlekọta', maka ihe, nke ọ bụrụ na inyocha ya n'ime ụlọ ọrụ GGZ dị ntakịrị, ọ nwere obere ilebara anya, mana ọ kachasị mkpa 'mkpọrọ mgbe ị na-a medicationụ ọgwụ'kwesịrị ime. Nke a bụ ihe ndị dere akụkọ gụnyere ihe ndị ọzọ dịka ndụmọdụ dị na akwụkwọ ozi ahụ:
Usoro ihe omimi ebe ihe ndi ozo choro ma obu karie ike: iwu ndị nlekọta na-amanye mmadụ, n'ihi na ndị a dị na usoro mmejuputa ma chọpụta nhazi nke nlekọta maka akụkụ dị mkpa nke ndị otu a chọrọ.
Enwere oke nke enwere enwere iwu ga - eme maka nnabata ndị mmanye (nihi na mmejuputa iwu erutela na usoro mmejuputa iwu - na nchikota: o na - eme na emeghi iwu). Nke ahụ bụ ihe echezọ ya ụgwọ n'aka Edith Schippers nke m tinye akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ n'okpuru ụlọ omebe iwu gara aga kariri puku ise banyere. Nke pụtara na ụgwọ ahụ pụtara na ndị mmadụ gbara gburugburu ya chere na ha nwere ike gbagwojuru anya nwere ike iburu ya site na itinyeghị aka nke ọka ikpe ma ọ bụ onye na-ahụ maka mmụọ, a ga-atụba awa 18 n'ụlọ nga maka ilele (na -ekwe omume nke inye “ ogwu ”. Anabataghị iwu ahụ n’oge ahụ, mana nkọwasị n’akwụkwọ ozi a doro anya na emeela ya n'ezie ka enwee iwu ahụ. Yabụ na anyị chọrọ ụfọdụ PsyOp-jes iji mee ka ndị mmadụ nwekwuo ike na ọnọdụ nnabata. Ọzọkwa ndị ọrụ GGZ ahụ ga-ekwenye n'eziokwu na ọ bụrụ na ha abịa na ọgụgụ isi ha, ọ ga-abụ ihe dị mma maka ihe.
Ọ bụ eziokwu ihe niile banyere 'onye dị mgbagwoju anya'. Kedu mgbe mmadụ bụ onye dị mgbagwoju anya? Ọ bụ naanị mgbe ị gburu nwatakịrị nwanyị nke na-aga ịnya igwe kwụ otu ebe na ANWB na igwe kwụ otu ebe ya ma tụba ya n'okirikiri ebe ndị agha gara aga iji lie ya, gwuo ya ma tinye ya n'ụgbọ mama gị. ga-ebugharị iji lie ya ọzọ? Nke ahụ ọ bụ mgbe ị na-egbochi ndị na-agagharị nkịta na-ezighi ezi n'ihi na enwetara gị ọrụ site n'aka ndị mmụọ ọjọọ? Ma ọ bụ, ị bụkwa onye nwere mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na enwere ike ị nweta ọghọm agwa agwa dị iche na echiche gị dị iche na nke steeti?
Ihe mere ka ndị mmadụ kwenye bụ ikpe ndị kachasị njọ anyị hụworo na mgbasa ozi; okwu ndị ahụ m chere na ọ ga-abụ arụmọrụ uche (PsyOps). Agbanyeghị, omume bụ na mgbe iwu ekwuputara na akwụkwọ ozi minista ka na-abịa, ndị ị hụrụ n'anya nwere ike ịkpọ akparamaagwa ahụ wee kwuo na enwere ike ịgbagha gị. Mgbe ahụ, enwere ike iburu gị n'enweghị enyemaka nke onye ọka iwu ma ọ bụ psyche. Ruinerwold na-eyi ọha iro ezinụlọ agbakwunyerela ntọala maka iwepu ụzọ maka inwe akwụkwọ ikike. Enwere ike ịkpọga gị mgbe ahụ, dị ka 'nna mmụọ' nke 'ezinụlọ ezi mmụọ' ma kpọchigide ya maka ikiri.
Ọ dabara nke ọma, na ihe niile na-eme dị ezigbo ala. Ọ dịghị onye n’ime ndị agbata obi gị ga-eme mkpesa. E kwuwerị, ọ dị ka ụgbọ ihe mberede, bọs ị bulitere. O meghewo windo, ị na-ekechikwa nke ọma. Eleghị anya ha nụrụ ka ị na-alụ ọgụ, mana ndị agbata obi gị akwadebekwala site na mgbasa ozi ma ọ gaghị eju gị anya. "Always nwere mgbe ụfọdụ echiche pụrụ iche"Ha ga - ekwu. Ke ibuotikọ site GGZ ewumewu Mondriaan site na Heerlen anyị na-ahụ ihe ndị a banyere otu esi ebugharị gị dịka onye nwere ike ịnwe nghọta (mara na onwebebeghị ihe ọ bụla, ma ị nwere ike ịdị na-agbagha ma ọ bụ na ị ga-agbagha).
Transportationgbọ njem kwesịrị ekwesị dị mkpa n'ihi na ndị na-emeghị mpụ adịghị n'ime ụgbọ ala ndị uwe ojii. Na mgbakwunye, ụgbọ ihe mberede anaghị adịkarị mkpa na nke a. Site n'iji ụgbọ njem kwesịrị ekwesị, a na-ebugharị ndị a na ọrụ dị mma, ọfụma, enweghị usoro nlelị. Enyerela onyinye maka pilot kwesịrị ekwesị nke ZonMW jiri mee ihe otu afọ. N'ime oge a, a ga-enyocha ya ugboro ole ọ ga - eji ụgbọ njem kwesịrị ekwesị.
Ke ibuotikọ site RTV Drenthe site na 14 August 2019 anyị hụrụ na a chụpụrụ akparamaagwa uche oge niile. Ebee ka ndị niile ahụ gbagwojuru anya si bịa na mberede? N'ọnọdụ ọ bụla, anyị achọpụtaworị n'elu na emeghela ite maka ya, yabụ nke ahụ yiri ka ọ nwere mmetụta na-akpali akpali. Uche uche dọpụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2018 na 900, o doro anya na nke ahụ bụ ntakịrị ihe mgba. Mana dị ka ekwuru, anyị esitela n’usoro mgbasa ozi were foto nke iwe na ọha mmadụ na-abawanye. Dịka ọmụmaatụ, n'izu gara aga anyị hụrụ na iwe megide ndị ọrụ nlekọta ntorobịa ga-abawanye. Nke ahụ ọ nwere ike ịbụ na ọ bụghị naanị ihe ama ama na-egosi na iwe adịlala elu site na aha nlekọta 'Orightian' mara mma 'natara? Ànyị na-agba ọgụ dị ọcha na GGZ na ogige agụmakwụkwọ n'azụ ọmarịcha ọnụ ụzọ dị mma a na-akpọ "nlekọta ndị ntorobịa" (lee ebe a)?
Agbanyeghị, ndị uwe ojii ga-enyere ndị na-eme mmụọ aka oge niile. Mgbe ahụ onye ọrụ na-anya maka nchekwa nke ndị ọrụ. N'afọ nke abụọ nke ọgụgụ isi na-agba, enwere ike ịhụ ntakịrị mmụba nke iwe. Hendriks kọwara, "Nke ahụ bụkwa maka na anyị na-anya ụgbọ ala karịa, mana ndị uwe ojii makwaara ebe anyị ga-achọta anyị."
Na mbụ Soviet Union, ndị mmadụ na-emegide echiche ndị gọọmentị tinyere na ya bụ ndị a na-akpọ ndị nkwenye. Akụkọ Ruinerwold 'ghost ezinụlọ' emeela ka ndị mmadụ ghara ịkatọ usoro agụmakwụkwọ site na steeti. Ndị a bụ ndị kwere na mọ na ndị nwere ubi nke aka ha. 'Nna nwatakiri' bụ ụrọ dị ka akụkọ a (dị ka o siri dị) akụkọ PsyOp. Anyị nwere ike ugbua hụ nkwadebe nke ọha mmadụ ebe a. A na-akpụzi ndị bi n'ime nnabata oge na oge ọzọ. Gọọmentị steeti chọrọ ka ị kọọrọ ndị agbata obi gị. Nke ahụ nwere ike ịbụ ndị nwere "omume na-agbagọ agbagọ". Iji maa atụ, n’ọdịniihu, ị nwere ike ikwenyeghi n’ihe nkuzi a na-akụzi n’ụlọ akwụkwọ praịmarị, ebe a kuziri nwa gị na ya abụghị nwa nwoke, ma ọ ka nwere ike ịhọrọ okike. Ndi Ruinerwold 'ghost family' PsyOp, ekebeworị ihere site na mgbe ị na-akpọrọ ụmụ gị n'ụlọ akwụkwọ, ị bụ nwoke nwere ike nọrọ n'ihe mgbagwoju anya nke “na-atụpụ” ụmụ gị. Ma oburu na inwere onwe gi inwe nsogbu, uche a g’ewe gi oge n’enweghi nsogbu.
Ànyị na-agbachapụ mkpocha nke ndị okwu nzuzo dị ka ihe dị 'mgbagwoju anya' na 'nlekọta'? Joseph Stalin na-akwa ọchị n’ili ya ma ga-eto steeti Dutch maka oke obi ọjọọ nke o jisiri na-eresị ndị ya ihe a. "A na-ebugharị n'ụzọ dị mma, nke na-enye obi ụtọ, na-enweghị isi, na arụmọrụ". Gulag alaghachitela, mana na jaket ‘care’. Ma ndị ọrụ GGZ? Ee, ha gha abakwara ego ha akwụ. Ha anaghị egbochi ajụjụ maka ihe kpatara eji bulie mmadụ. Ọ ga-adị mkpa maka ihe ndị ahụ “ndị nwere nghọtahie” ga-ejide onwe ha ọsọ ọsọ mgbe ha bu ụzọ ntụtụ ha. "Ọrụ bụ ọrụ, ego bụ ego, ọ bụrụ na anaghị m eme ya, onye ọzọ ga-eme ya". Befehl bụ befehl.
Zụta akwụkwọ ọhụrụ 'Eziokwu dị ka anyị siri hụ ya', chọpụta usoro aghụghọ niile wee chọta ụzọ akọwapụtara.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: mondriaan.eu, rtvdrenthe.nl
Onye ọ bụla Dutch nwere ike 'onye mgbagwoju anya' na njem nke psychulance
Mkparịta ụka taa maka ụgwọ Edith Schippers maka mkpọrọ na-enweghị ikpe
Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akụkụ 3)
Ọnụ ọgụgụ nke ndị nwere mgbagwoju anya kpatara nsogbu nsogbu?
Tags: iwe, Bart, Igbe, Els, agba, GGZ, nwoke, igbu ọchụ, ikpe ikpe, ndị mmadụ, akparamaagwa, wakporo, buso agha, enyemaka, U., van, ikpe, mgbagwoju anya
Chekinah dere, sị:
Ihe mere n'ezie Ruinerwold 'ghost ezinụlọ'. Bụ nnukwu hype nwa oge ma ọ nweghị ihe ọzọ. Nọgide n'ụwa?
Ole ebe ndi oru ugbo nọ? Constructionwa na-ewu ụlọ? Wdg.
"kaltgestellt"? Odi nkenke enwere ike ngaghari iwe a ma okachasi ma ndi ochichi ma obu ndi nnọchi anya ndi Steti ‘ndi nke abuo’ n’enye ndi otu a. Ọ dị ka DDR mbụ. Mba, nke a agaghị ekwe omume ebe a. Ahụ ụkwara.
Ndị ọrụ ugbo abanyela na mkparịta ụka mmetụta uche na sociopath / sycophant, gụọ uru gị.
Ekwurula m ya mgbe niile. Nkezi ndị Madurodam na-anabatakarị ikike ichebe ikike na-arụ ọrụ ... Ogige peat, olee ebe ogige ịta ahụhụ ndị ahụ ọzọ?
East agbanweela. Mgbidi ahụ dara afọ 30 gara aga, mana ọ bụ oge maka ịmalite iwu mgbidi ọzọ. Hụ America, lee Ọwụwa Anyanwụ Europe na oge a, ndị ọdịda anyanwụ bụ dick. Ka ị na-edekarị akwụkwọ, ị mepụtara nsogbu nke mgbaba na ndị mmadụ na-eti mkpu maka mgbidi ma ghara ịchọpụta na mgbidi na-egbochi gị. Chee ihe kpatara nke a ka Trump chọrọ ịzụta Greenland, kewapụ ihe niile, enweghị ụzọ mgbapụ ọzọ. Egwuregwu agụụ, ihe ngosi eziokwu.
Ọwụwa Anyanwụ bụ nnwale nke ụmụaka chọpụtara na socialism dị ọcha arụghị ọrụ iji mee ka ndị nkịtị kwụsịlata. Keepmụaka ahụ gara n'ihu wee mee ka ọ pụta ìhè na East dara. Ihe nzuzu, anwụrụ ọkụ na enyo. Mụ nwoke ahụ ka nọ n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ. Ọdịda nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ bu n'obi iji nweta njikọ dị n'etiti sistemụ abụọ dị iche iche, ikekete na mmekọrịta ọha na eze, ebe ụmụ oke nọ na-ahazi ibe ha nke ọma. East na West nnukwu gulag.
Anyanwụ, ị gaghị agwa m na 'ngwụcha nke ikpeazu' 11 / 9 / 1989-9 / 11 / 1989 nke nnwale ahụ duziri ma ọ bụ kpam kpam 'mebie' iji bulie ya ọzọ. Ah echefuru echezị Ah, echefue anyị niile otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị na Brussels.
Ladmụnwaanyị na ụmụ nwanyị ndị edemede na-enwe mmasị ịmegharị oge ụfọdụ. Ọ na-eme ka ihe ahụ niile bụrụ ihe na-atọ ụtọ, ọ bụghị ya? Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịlụ agha oyi nke na-achọghị ịnya ọkụ ... 😀
ps: Ndi faịlụ STASI na mbido 1990 ka akpacharaghi anya na Berlin ka emechaa digita? ... Oge akabeghi, oge ahu dika ugbua erutewo [Herausnehmen und ule]
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosemarie_Albrecht (Ezina Ursula 😉)?
Worldwa dum bụụrụ ụmụ nwoke ebe nile na-ejigide ọnọdụ ndị dị mkpa. Ha na-ezo mgbe niile na ha bụ ndị òtù klọb maka ndị nkịtị, mana n'etiti onwe ha, ha maara ibe ha, ntụaka, na ịgbanwe aha wdg na-arụ ọrụ ebube. Ha na akwado ibe ha.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-ekwu maka ha mana ee, anyị bi n'ọchịchị ọchịchị nke na enweghị mmasị na ya mgbe ị kwupụtara eziokwu. Ha nwere okwu kachasị elu mgbe niile, mara ihe niile nke ọma, ana-eto ha mgbe niile, bla, bla, bla. N’ezie ha achoghi ka ndi mmadu n’aju ajuju banyere umuaka nwoke ndi no n’uzo buru ibu, na ha bu n’ezie ndi si n’obodo ha. Nke a nwere ike itinye ihe ndị ha nwere na ndụ ha n'ihe egwu.
Nke a dịka ọmụmaatụ
uche ngwa ngwa ebe niile
Nwata, lee akụkọ!
Agatha Christie ma ọ bụ ndị edemede ndị ọzọ dabara n'ọnyà nke ezi ihe a
Maazị Stoker si Alkmaar 🙂
bia na ndi mmadu
Onye na-ere ahịa. “Ọnwa abụọ gara aga, o mere nnukwu mkpọtụ na mgbede. Ekwesịrị m ịgba bọl n'echi ya, yabụ jụọ ya ma ọ chọrọ ịdị nro karịa. O wee jiri mma kichin abụọ na-agba ọsọ n'azụ m. Emechiri m ọnụ ụzọ ahụ ka oge na-aga. Lee, abụ m nnukwu nwa, ma enwetaghịkwa m mma. "
@Marga, i chere nke a? anyị na-ekwu maka mmụọ ọgụgụ isi
ọ na-aga nke ukwuu ugbu a
Nke a jọgburu onwe ya, a gbagburu ya!
Ọ bụrụ na ọdụm agbapụ, a gbagbughị ya ozugbo.
A sị ka e kwuwe, nwanyị ahụ ga-ebu ụzọ gboo iku ume.
Akparịta akụkọ mgbasa ozi niile iji mee ka ndị mmadụ jiri ike na-eme ihe ike nke ndị uwe ojii America.
Ha na-agara ije ma ọlị:
N'ihe banyere edo, ndị uwe ojii erughị ala na fim dystopian sci-fi si Hollywood.
Okwu ahụ gbagọrọ agbagọ, nke ahụ nwere ike doo anya ... Ihe ọdịnala mbụ anụbeghị ihe ọ bụla na mbụ maka mmadụ niile 😀 A ga-emerịrị broom ahụ site na ọkwa niile nke ndị bi na ya, a ga-agbaji nguzogide
_ Otu onye na-ekwuchitere Veldzicht gwara RTV Oost na onye a na-enyo enyo nọ na ngalaba omekome nke ụlọ ọgwụ ahụ ma nata ọgwụgwọ ọrịa uche. O kwesiri ka o si n'ụlọ mkpọrọ ._
_ Cliniclọ ọgwụ na-agwọ ndị ọrịa nwere ụdị ọdịnala dị iche iche.
A na-akpọ Heroepvoedingskampen, nke igwe ntụgharị akwụkwọ akụkọ George Orwell sụgharịrị: Nlekọta ụbụrụ isi
Chei! Ma ndị ọrụ niile ejirila onwe ha kwenye na ha na-enye ezigbo nlekọta. Nkọchapụta mmiri na mkparịta ụka otu na ndị njikwa.
Ọ bụrụ na mmadụ na-ewe iwe maka mmụta ahụ ọ bụla, anyị na-ekwu "ị ga-aga n'ọnụ ụlọ dị jụụ".
Esemokwu dị ka nchegbu.
“Papa, i lekọtara ndị ahụ hụrụ n'anya n'ọrụ ha taa? You kwadebere ọgwụ ogwu ha n'ụzọ sara mbara? "
Ọ bụghị nchegbu, ọ bụ ụlọ mkpọrọ. Enwere mkpọchi na ọnụ ụzọ ndị toro eto. Ọ bụ ụlọ mkpọrọ (m ga-ekwughachi ya ọzọ). Lee ya maka ihe ọ bụ: ọ bụ ụlọ mkpọrọ. Ulo akwukwo a gha emegharia. Ọ bụ ihe a na-akpọ na Nazi Germany n'ogige ịta ahụhụ '40 /' 45, mana mgbe ahụ na uwe nlekọta dị mma. Ọ bụ ihe a kpọrọ “gulag” na Soviet Union. Onwere ndị nkwenye dị n’okpuru isiokwu a bụ “onye ọrịa uche”.
Ọzọkwa, a na-eme ihe onyonyo igwefoto nke ọma site n'ụlọ ọgwụ nke enwere ike ịtọ ya niile iji mepụta echiche na ọ kacha atọ ụtọ na mmadụ.
A na-akpọ mkpọsa.
Lee channelụ YT ma hụ mgbe ebugore ihe osise ndị na-adịbeghị anya n'izu a. Enwere ihe ojoo a na-eme na ulo oru mgbasa ozi na-acha n’uche echiche nke aturu nwere obi uto.Ma oru (ulo oru ikpe) di ebe a iji chebe ezigbo nwa amaala na ihe obula nke na-ewepu ọnọdụ ya. ọkọlọtọ.
lee ihe mpempe ebe a na - adighi adi ebe ndi mmadu anaghi edenye ya aha. Nke a ga - agharịrị maka nchịkọta akụkọ, onye na - enye ụdị iberibe ndị a? mwepu ‘ikpe’ na ‘nchekwa’ ikekwe…
N'ezie ... ọ bụ akụkọ ọzọ dị ịtụnanya na okpokoro nri ụtụtụ ga-anabata ma kwenye ndị Dutch na-a coffeeụ kọfị, n'ihi na akwụkwọ akụkọ na ya mere ọ ga-abụ eziokwu ... "Ha anaghị eme nke ahụ"
A na-ahazi ya ma enwere m ike igosipụta ya site na nyocha nke usoro oge. Ọ malitere karịa afọ 6 gara aga n'okpuru nduzi nke onye otu VVD Opstelten
Ọchịchọ nke Ndị Na-eme Mgbanwe
Agbanye Agbamume Na-akpa aghara
Emepe mkparịta ụka 30 / 09 / 14 nnabata nke ndị nwere mgbagwoju anya;
Nke a ga - ekwe omume! ”Onye Minista I. Opstelten dere
Onye isi ala Opstelten na-aza thetụ Nwanna Nwanyị Ukwu
Ike NLP, Ike
Ikekwe ọ marala ọtụtụ ndị, mana ọ bụụrụ m ihe ọhụrụ: ebe a na-emeghe kọntaktị kọntaktị maka ndị nwere mgbagwoju anya!
Huntchụ nta amoosu nke narị afọ 21 emeghewo! Ndị a bụ atụmatụ dị n'ime obodo ka anyị nwee ike jiri nwayọ nwayọ na-elebara ibe anyị anya ma na-ebugara gọọmentị akparamagwa. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ọkwa ọhụụ, mgbe ahụ anyị ga-anata ọnụ ọgụgụ etiti obodo.
Ka ichu nta malite
@ Kedu ihe ị chọrọ ...
Jeeeesus christ ekele maka nkwupụta a, ọ bụ nghọta, ọ bụ olile anya.
Mana Ho !!!
Anyị nwere ike kwuo stestelten en masse dị ka onye dị mgbagwoju anya.
Yabụ ole na ole ;-), Nieuwkerkje na ndị nwụrụ Nek etceeeteraaa ...
Amaara m na anyị ekwesịghị iji sistemụ ahụ, mana olulu ha gwuru na-adaba na ha onwe ha, nke ahụ ga-eme ụmụ ụmụ ha n'otu ntabi anya na-eteta na mberede.
" Onye akaebe na-ahụ maka okpueze na egwuregwu dị n'etiti mpụ steeti na onye nnọchi anya (ọkàiwu Meijering megide Plasman)
Robert Jensen "Donald Trump ekweghị na New World Order" na-egosi: Jensen.nl bụ ndị mmegide na-achịkwa »
Nleta nile: 14.548.569
Martin Vrijland op Nrụgide a na-enye ụmụaka dị ukwuu!
Ntinye op Nrụgide a na-enye ụmụaka dị ukwuu!
guppy op Nrụgide a na-enye ụmụaka dị ukwuu!